Wararkii Ugu Dambeeyey ee Magaalada Nairobi ee Xarunta Dalka Kenya
Home Somali News East Africa Wararkii Ugu Dambeeyey ee Magaalada Nairobi ee Xarunta Dalka Kenya
Wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya magaalada Nairobi ee Xarunta Dalka Kenya waxaa kuwaramayaan in howlgalo ballaaran ay wali halkaasi ka wadaan ciidamada kenya booliska gaar ahaan kuwaasi oo dad ka badan 50 qofood oo somali ku jirto xabsiga utaxaabay.
Wariye kusugan magaalada Nairobi xaafada Somalida ku badan tahay Islii ayaa waxa uu soo sheegayaa in dad badan oo somali ah iminka xabsiga ku jiraan kuwaasi oo lala xiriirinayo qarax ka dhacay halkaasi.
Ciidamada Amaanka Dalka Kenya ayaa wali howlgalo ballaaran waxay ka wadaan Xaafado kuyaalla Islii gaar ahaan halka loo yaqaano Section 2 iyo Section 3 waxaana halkaasi kusugan ciidamo badan oo kenyan ah.
Kadib Qaraxyo xoogan oo xalay ka dhacay Xaafada islii qaasatan halka loo yaqaan Calafornia iyo Section 2 waxaana lagu soo waramayaa khasaaro inay geysteen qaraxyadaasi.
Dhalinyaro badan oo ku dhaqan Xaafada Islii ee magaalada Nairobi ayaa waxay sheegayaan in dad badan oo ku dhaqan halkaasi dhibaatooyin kala kulmayaan ciidamada kenya oo jir dil ugeysanaya.
Wixii kasoo kordha Howlgalada Islii insha allah kala soco Midnimo.Com.